अस्पतालका आकस्मिक कक्ष जोखिममा, बिरामीको चाप र ओहोर दोहोर मुख्य कारण - Netizen Nepal
अन्य कोरोना अपडेट गतिविधि घटना मुख्य समचार वर्गीकृत समसामयिक स्वास्थ्य
अस्पतालका आकस्मिक कक्ष जोखिममा, बिरामीको चाप र ओहोर दोहोर मुख्य कारण
November 22, 2020 November 22, 2020 नेटिजन नेपाल	0 Comments	अस्पताल, आकस्मिक कक्ष
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर। काठमाडौँको मुटुमै रहेको वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष चाडबाडका बेलामा समेत बिरामीले भरिभराउ रहन्छ । दशैँ, तिहार अनि छठ पर्वका बेला समेत आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप घटेन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को चाप बढ्दै गएपछि जेठो अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको समेत जिम्मेवारी थपिएपछि त्यहाँ बिरामी आउने क्रम दोब्बर भएको हो । आकस्मिक कक्षमा त झनै बिरामीको चाप बढ्दो छ ।
कोभिडका कतिपय बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपयलाई आकस्मिक कक्षमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सकेजति सेवा प्रदान गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरी बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक, व्यक्तिगत र साप्ताहिक बिदा समेत नलिएर आकस्मिक सेवा आमनागरिकलाई उपलब्ध गराइएको छ । कुल ४३ शय्या रहेको वीरको आकस्मिक कक्ष उहाँले भन्नुभएझैँ शुक्रबार अत्यधिक बिरामीले भरिएको थियो । अझै थप बिरामीको ओहोरदोहोर चलिरहेको थियो ।
वीर अस्पतालका चिफ कन्सल्ट्यान्ट तथा आकस्मिक सेवा विभागका प्रमुख डा. विष्णुबहादुर बस्नेतका अनुसार रातो, पहेंलो र हरियो ब्लक बनाएर आउने बिरामीको अवस्था हेरेर व्यवस्थापन गरिन्छ । मेडिकल कन्सल्ट्यान्ट, चिफ मेडिकल कन्सल्ट्यान्ट, मेडिकल अफिसर, ‘डिउटी’मा खटिने पारामेडिक्स र नर्सहरू दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने गरेका छन् । सेवालाई व्यवस्थित बनाउन खटिनेहरूको नामावलीसहितको विवरण हरेक दिनजसो नै अद्यावधिक गरिन्छ ।
निरन्तरको डिउटीमा रहेकाको हकमा भने दैनिक कार्यतालिका अनुसार नै काम हुने गर्छ । आकस्मिक सेवाकै लागि १२ जना स्टाफ नर्स खटाइएको छ । बिरामीको प्रारम्भिक अवस्था जाँच्ने, नसा खोल्ने, औषधि र अक्सिजन चढाउने काममा चिकित्सकलाई सघाउने काम गर्नुहुन्छ । कोभिडको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी आकस्मिक कक्षमा काम गर्ने सबैलाई घर पुर्याउने र ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वीर अस्पताल दुई महिनाअघि कोभिड अस्पताल बनेको हो । कोभिड लागेको हो भनेर सुरुवातमा बिरामी चिनिँदैन । भयग्रस्त अवस्थामा कोभिड लागेको शङ्कास्पद बिरामी जाँच्न चिकित्सक डराउने अवस्था थियो, विस्तारै सहज भएको छ । आएका शङ्कास्पद बिरामीको पीसीआर निःशुल्क हुन्छ । पीसीआर गरेपछि आकस्मिक कक्षको एककुनामा रहेको छुट्टै पाँचवटा आइसोलेसनको शय्या राखिन्छ । पोजेटिभ आएको खण्डमा अस्पतालको अर्को खण्डमा व्यवस्था गरिएको शय्या सारेर उपचार गरिन्छ । “उपचार नपाएर फर्कनुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यस्तो रहेनछ”, तराईबाट आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउन आइपुगेका एक बिरामीको भनाइ छ ।
आफू बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सुरक्षा विधि अपनाएर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । खोप र उपचारको खास विधि उपलब्ध नभएकाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाका उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन । पीपीई, ग्लब्स, सेनिटाइजर, एननाइन्टी मास्क, भाइजरको निरन्तर प्रयोगसँगै बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने गरिएको छ । “कोभिड लागेका बिरामी आएमा दुरदुर गर्दैनौँ, पीसीई लगाएरै उपचार गर्छौं र ज्यान बचाउँछौँ’’, उहाँले थप्नुभयो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड सङ्क्रमण भइहालेमा १३ दिनसम्म अलग्गै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसपछि थप एक हप्ता घरमा आराम गरेपछि बल्ल काममा आउन पाइन्छ । कोभिड अस्पताल बनेपछि परीक्षण कक्ष बनाउने विषयमा अस्पतालले स्थान अभाव खेप्नुपरेको छ । विगत केही समयअघि चार जना चिकित्सकले काम छाडेकाले चिकित्सकको अभाव समेत देखिएको छ ।
“निको हुनेले चाँडै शय्या छाडिदिए हुने, अनि हुने खानेले थोरै भए पनि शुल्क बुझाए नहुनेलाई सहज हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो । सबै भेन्टिरलेटर एकैचोटि सञ्चालनमा रहँदा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
राजधानीमै रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा व्यवस्थित सेवा दिइरहेको अस्पतालका सञ्चार संयोजक दीपक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । “चौबिसै घण्टा चिकित्सक र नर्सहरू अलर्ट रहेर काम गरिहेका छौँ, अझ क्यान्सर देखिने बिरामीलाई राम्रो सेवा दिनका लागि क्विक एक्सन टिम खटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जसका कारण अन्यत्र उपचारका प्रक्रियाका लागि सघाउने गरेको छ । पीसीआर परीक्षणका लागि छुट्टै काउन्टर रहेकाले आकस्मिक कक्षमा चाप कम छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट।
← खानेपानीका लागि रातभरि जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता
स्पेनी ला लिगामा एटलेटिको म्याड्रिडसंग बार्सिलोना पराजित →
उपत्यकाका अस्पताललाई आकस्मिक बाहेकका अपरेशन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
October 12, 2020 October 12, 2020 नेटिजन नेपाल	0
चितवनमा ७२ घण्टाभित्र कोरोना उपचार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने
March 17, 2020 March 17, 2020 नेटिजन नेपाल	0
किन चलाइयो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा एकाबिहानै डोजर
February 6, 2020 February 6, 2020 नेटिजन नेपाल	0